India kwụsịrị mmachi njem niile, mepee ókèala site na Ọktọba 15
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » India kwụsịrị mmachi njem niile, mepee ókèala site na Ọktọba 15
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ndị ọrụ Minista na -ahụ maka ime obodo ekpebiela ịmalite inye ndị ọbịa mba ofesi na -abịa India site na ụgbọ elu emebere emebere site na Ọktọba 15, 2021.
India webatara mkpọchi siri ike ma kwụsịtụ visa maka ndị ala ọzọ n'ihi iyi egwu nke ọrịa COVID-19 mere na Machị 2020.
Imepe emepe na-abịa mgbe India na-achọ iweghachi akụ na ụba ya mgbe oke ifufe nke COVID-19 na mbido 2021.
Ndị ọrụ India na-achọ ịkwalite akụ na ụba site n'inyere aka ịmaliteghachi njem nlegharị anya, nke bụ mpaghara dị mkpa maka akụ na ụba obodo.
Na Machị 2020, Prime Minista India Narendra Modi tiri iwu mkpọchi siri ike wee wepụta visa mbata maka ndị ọbịa si mba ọzọ n'ihi nnukwu ihe iyi egwu nke ọrịa coronavirus gosipụtara, na -emechi ndị njem mba ofesi ókèala obodo ahụ nke ọma.
Taa, ndị ọrụ gọọmentị India kwupụtara na gọọmentị ga -emepe ndị njem si mba ofesi malite na Ọktọba 15, na -emesị kwụsị mmachi ndị nọrọla ihe karịrị otu afọ.
India's Ozi Homelọ wepụtara nkwupụta na Tọzdee, na -ekwupụta na ndị ọrụ gọọmentị "ekpebiela ịmalite inye ndị ọbịa mba ofesi na -abata India site na ụgbọ elu ndị ebiri ebido malite na Ọktọba 15, 2021."
Ntughari ókèala na -abịa dịka India na-achọ iweghachite akụ na ụba ya mgbe oke ifufe nke COVID-19 na mbụ na 2021 nke butere ihe dị ka ọrịa 400,000 na ọnwụ 4,000 kwa ụbọchị, ụlọ ọgwụ karịrị akarị na ịmanye usoro siri ike na mbọ iji weta mgbasa nke nje n'okpuru nchịkwa. .
Ebe ihe karịrị nde ndị India 250 ugbu a nwere okpukpu abụọ na ikpe dara ihe ruru 20,000 kwa ụbọchị, ndị isi achọọla ime ka akụnụba ahụ sie ike site n'inyere aka ịmaliteghachi njem nlegharị anya, nke bụ mpaghara dị mkpa maka akụ na ụba India.
Mmetụta nke mmachi a emeela ka ọ nwee nkwarụ IndiaIndustrylọ ọrụ njem, nke na -akpata erughị ndị ọbịa 3 nde na 2020, nke bụ mbelata 75% site na afọ gara aga, dịka ọnụ ọgụgụ gọọmentị siri kwuo.
Agbanyeghị, n'agbanyeghị agbamume nlọghachi ndị njem na India, gọọmentị obodo ahụ doro anya na a ga-atụ anya na ndị ọbịa niile ga-agbaso usoro nchekwa nchekwa COVID-19 n'oge nleta ha. Achọpụtabeghị na agbanyeghị ihe ndị ọbịa ga -atụ anya ka ha zute tupu ha eme njem na mba ahụ.